काठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थपिन्छ कि थपिदैन ? यस्तो छ तयारी- | समाचार
June 11, 2021 NepstokLeaveaComment on काठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थपिन्छ कि थपिदैन ? यस्तो छ तयारी-
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता लम्बिने भएको छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। हालको परिस्थितिमा निषेधाज्ञा ल’म्ब्याउनुपर्ने देखिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए।
‘को’रोना संक्रमणदर उल्लेखनीय रूपमा न’घटेको हुनाले यही परिस्थितिमा निषेधाज्ञालाई जारी राख्नुपर्ने रायसुझाव आएको छ,’ पराजुलीले भने। निषेधाज्ञा केही खुकुलो भने हुनसक्ने उनले बताए। निषेधाज्ञामा निर्माणजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ। बिहान ९ बजेसम्म मात्र किराना पसल तथा तरकारी पसल खुल्दै आएकोमा अब एक घन्टा थपेर १० बजेसम्म खुल्न दिइने छ।
उपत्यकामा निषेधाज्ञा जेठ ३१ गतेसम्म जारी गरिएको थियो। यो तीन दिनपछि सकिँदैछ। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा छलफलहरू भइरहेको पराजुलीले बताए। ‘मृ’त्यु’दर घटे पनि सं’क्रमणदरमा सुधार नआएको विश्लेषणका आधारमा निषेधाज्ञा लम्बिन्छ,’ पराजुलीले भने।
निषेधाज्ञा ल’म्ब्याइएको साता को’रोना संक्रमणदर विश्लेषण गरिन्छ। ‘त्यसपछि निषेधाज्ञा के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिइन्छ,’ पराजुलीले भने। जेठ ३१ सम्म जारी निषेधाज्ञापछि यसको मो’डालिटीमा परिवर्तन ल्याइने सक्ने र सवारीसाधनमा जोरबिजोर लगाउन सकिने बताइएको थियो।
निषेधाज्ञा लम्ब्याउनुको कारणमा भि’डभाड नै प्रमुख कारण रहेको पराजुलीले बताए। स्वास्थ्य मापद’ण्ड पालना नहुनु, मास्कको प्रयोग नहुनु र भि’डभाड बढी गर्नुले संक्रमणदरमा सुधार नआएको बुझाई जिल्लास्तरीय को-भि’ड सं’कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)को ठहर छ।
निषेधाज्ञा वा लकडाउन जे भने पछि स्थानीय प्रशासन ऐ’न अन्तर्गत जारी गरिने गरिएको छ। यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय को-भि’ड सं’कट व्यवस्थापन केन्द्र रहन्छ। त्यसमा स्थानीय निकाय, स्वास्थ्यका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाहरू रहन्छन्।
जसको श’ब दुवै खु’ट्टा बा’धे’र गा’डि’एको अबस्थामा भेटियो !